OS in la bilaabay ka dib markii ay Microsoft XP daaqadaha ayaa sidoo kale la socoto version kiniin ah si loo hubiyo in waayo-aragnimo user la qaaday tallaabo hore ee arrintan la xiriira. Waxaa sidoo kale in la xuso in version kiniin ah waa wax uu had iyo jeer la iska indho sida weyn ee ay xoogga oo dhan ee casriga ah shaqsiyaadka ugu xeel dheer alaabtayda oo qoraal ah ee la xiriirta daaqadaha ayaa had iyo jeer ahaa PC iyo laptops iyo waayo-aragnimo la xiriirta dadka iyo iyagoo ordaya daaqadaha on iyaga. Waxaa sidoo kale in la xuso in natiijada ugu wanaagsan ee la xiriirta OS kasta oo aan marnaba lagu xukumi karaa haddii oo dhan dhufto ee aan la tixgelin iyo sabab la mid ah tutorial tani ayaa loo sameeyey si loo hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah muuqaalada tahay user a raaxaysan kartaa kiniin ah ee la xiriirta Windows 10 ayaa looga munaaqashoodey warbixino weyn si user doorto oo keliya ma aha waxa ugu fiican ugu helo ka mid ah nidaamka laakiin sidoo kale uu helo ugu fiican ee la xiriirta socda OS ah. Dhammaan xogta farsamada in lagu gundhig tutorial gudahood sidoo kale hubin doona in user helo ugu fiican iyo gobolka macluumaad ku saabsan tahay daaqadaha 10 iyo waafaqid la xiriira OS marka ay timaado daaqadaha. Info casriga ah waxa kale oo hubin doona in user helo qaababka ugu wanaagsan iyo sidoo kale reserved karaa kiniinka si loo hubiyo in daaqadaha 10 shaqo fiican loogama.
Qeybta 1: karaa daaqadaha 10 kulan oo looxa? Maxay ku saabsan shuruudaha nidaamka loox oo ay ku maamulaan daaqadaha 10
Qeybta 2: Sida loo soo dejisan iyo rakibi daaqadaha 10 aad kiniin, sida ay u awood Tablet Mode ee Windows 10
Qaybta 3: fullintu kiniin hab
Qeybta 4: Sidee waa waayo-aragnimo ah ee orodka daaqadaha 10 looxa?
Qeybta 1: karaa daaqadaha 10 kulan oo looxa? Maxay ku saabsan shuruudaha nidaamka loox si uu ugu tartamo daaqadaha 10
Hardware in loo baahan yahay in la hubiyo in Windows 10 waxaa maamula on kasta iyo nooc kasta oo ka mid ah qalabka Microsoft ayaa loo hubiyo in dhammaan shuruudaha ma dulmari oo keliya, laakiin sidoo kale la xiriiray in dadweynaha guud si ordaya OS marna waa weyn ah macaamilo for. Waa xaqiiqo dhalashada ah in daaqadaha 10 saacidi doonta oo dhan ordi karaan XP daaqadaha ama ka dib, laakiin marka ay timaado kiniin ah ka dibna waxaa been koox ballaaran kaas oo u hubinaya in doorashada OS ee nidaamka xaqiiqdii waa howl weyn sida kuwa PC ee kiniin kasta oo uu leeyahay tilmaamaha gaarka u ah oo kala duwan. Isla Windows phone 8.1 waa in la ogaadaa in kiniinka isagoo processor ah X3 Intel Atom Sidaas hagaajin awood u yeelan doonaan in ay sii wadaan daaqadaha 10 si fudud. RAM oo kiniin ah user uu doonayo in uu ordo daaqadaha 10 ee waa in 512MB iyo meesha bannaan ee la xiriira in loo baahan yahay in arrintan la xiriira waa 4GB. Qaraarka ayaa waxaa ku taliyay shirkadda arrintan la xiriira waa 800x480 pixel laakiin waxaa xaqiiqo ah lagula talinayaa in ay leeyihiin xal sidii sare intii suurto gal ah si loo hubiyo in waayo-aragnimo user la wanaajiyey in sida ugu wanaagsan ee suurto gal ah. Kiniiniyada dhamaadka sare in ay leeyihiin xal ah 2560x2048 iyo 4GB RAM sidoo kale taageeri OS ee sida uga wanaagsan ee suurto gal ah. Kala duwan oo qalab Mid sida kuwa isagoo go'aan 144x900 loo baahan yahay ugu yaraan 2GB RAM si loo hubiyo in OS ah waxaa maamula hab ugu fiican. Waayo, kulli kiniiniyada weyn looga baahan yahay waa isku mid sida in PC. Liiska shuruudaha kiniin ah oo ay la socdaan PC ayaa sidoo kale loo akhriyi karo ee
Qeybta 2: Sida loo soo dejisan iyo rakibi daaqadaha 10 aad kiniin ah, sida ay u awood Tablet Mode ee Windows 10
Waxa jira laba su'aalood oo lagu kor ku xusan iyo jawaabta oo labadoodaba waxaa ka xasilloon tahay si sahlan haddii user ayaa lagala soo bixi eegis iyo iska diiwaan gashan sidii xubin ka mid ah barnaamij ka tirsan ka. Waxaa sidoo kale in la xuso in user waa in la hubiyo in ugu fiican oo gobolka ka mid ah geedi socodka tahay waxaa mar walba raacay sameeyo si natiijada waa u doonaya. Si aad u soo bixi Windows 10 version Mobile ama kiniin user waa inay raacaan talaabooyinkan hoos ku qoran:
1. Laga soo bilaabo URL https://insider.windows.com/ user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in barnaamijka ka tirsan waxaa la saxiixay oo ah:
2. user ayaa markaas u baahan yahay ilaa saxiixo si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
3. shuruudaha iyo xaaladaha ay la socdaan ikhtiyaarka loo baahan yahay ka dibna ay tahay in la soo xulay in ay sii wadi:
4. shaashadda soo socda user u baahan yahay in la doorto ikhtiyaarka Mobile inaad kala soo baxdo kiniinka ama version mobile ah OS dooda:
5. qalab Rufus kan markaa waa in laga soo degsan si ay u abuuraan USB version la qaadan karo daaqadaha 10. URL waxaa http://rufus.akeo.ie
6. A mouse banki oo ay la socdaan kiniinka ka dibna in lagugu xiro nidaamka si loo hubiyo in hannaanka horumarka,
7. user ayaa markaas u baahan yahay si uu ugu tartamo Mudanayaasha USB Downlaods eee nidaamka iyo gudahood doorasho soo kabashada magaca qalabka waxaa markaas waa in la soo xulay ay:
8. Habka gelinayaan daaqado 10 waa xoogaa si toos ah iyo si sahlan iyo nidaamka loo hubiyo in daaqadaha loo xiraa ka dhigi doonaa oo aan ka kaaftoomi kasta oo ay u siin Falanqeynta ka mid ah qalabka sida fiican u dhammayn nidaamka Dhameystiran:
Qeybta 3: Inay u sahasho hab kiniin
Tallaabooyinka soo socda ayaa la raaco arrintan la xiriira:
1. Jidka in uu yahay in la raaco arrintan la xiriira waa Settings> System> Tablet Mode si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo:
2. desktop ee daaqadaha ayaa sidoo kale gebi ahaanba bedeli doonaa:
Qeybta 4: Sidee waa waayo-aragnimo ah ee socda daaqadaha 10 looxa?
Maxaa yeelay, dhammaan dadka isticmaala kuwaasoo qaadashada kiniinka iyo alaabtii la xiriira menu bilowga gudahood qalabka ay u hubiso in menu ee OS waxaa gundhig u gudahood ka dhigi lahaa. Waxaa sidoo kale in la xusay in shirkadda hab si loo hubiyo in OS waxaa kale oo ku saabsan qalabka android si users ka heli kartaa ugu fiican iyo kan gobolka ee functionalities tahay ayaa la kariyay.
Marka marxaladdan waxaa la sheegay in laga yaabo in OS u diyaar uma aha kiniiniga la taabto iyo users laga yaabaa in aanay awoodin in ay helaan ugu wanaagsan ee reer daaqadaha 10-aragnimo marka ay timaado kombuyuutarrada gacanta laga reebo laptops ah. Waxaa sidoo kale in la xusay in shirkadda ayaa xaqiijiyey in dadka isticmaala arrimaha ay la kulmaan inta ay ka howl daaqadaha 8 iyo 8.1 ereygu u taaban qalab la cafiyo in qaar ka mid ah kordhiyo laakiin markan waqti si dhab ah loo xisaabiyo waayo-aragnimo user ee arrintan la xiriira ma aha sahlan oo dhan.
> Resource > Windows > Sida loo ha daaqadaha 10 kulan oo aad kaniini